Shaqooyinka Dubai ee Aljeeriya oo leh shirkadda Dubai City 🥇
Gulf Jobs oo ku yaal Dubai
Waxaa laga yaabaa 1, 2018
Published by Shirkadda Dubai City at April 29, 2018
Shaqooyinka Dubai ee Algeria
Shaqooyinka ku jira Dubai waayo Algerian waxaa laga heli karaa shirkadeena. Kooxdayadu waa ka caawinta dadka inay shaqo ku helaan UAE. Shirkadeena waxay ka caawisaa shaqooyinka Dubai ka jira Algerian. Waan maamulnaa shaqo raadin Caawinaad u leh dadka reer Aljeeriya ee ku sugan dalka Isutaga Carab Emirates. Marka, haddii aad maareynayso xirfad shaqo Aljeeriya. Waxaad fursad u heli doontaa inaad xirfad ku hesho UAE. Shirkaddayadu waa in lagu caawiyo dadka ajnabiga ah si ay shaqo u helaan. Shirkadayadu waxay caawimaysaa dadka soo socda macluumaadka ku saabsan shaqo raadinta Aljeeriya. Iyadoo aanu hage faahfaahsan, waxaa laga yaabaa in aad gacan qabato.
Shirkadeena waxay caawimeysaa qurba-joogta iyagoo go'aansanaya in ay noqon doonaan oo xiiseynaya shaqo Dubai iyo Abu Dhabi. Tayada shaqadu aad ayey uga fiican tahay shaqooyinka ka jira Dubai ee Algerian. Shaqada ku saleysan Aljeeriya aad bay u yar tahay xagga mushaharka. Shaqooyinka ugu fiican Dubai waayo, Algeria waa xaqiiqdii waxaa bixiyay shirkadeena. Waxaa jira fursad sii kordheysa oo loogu talagalay Algeria ee Dubai. Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay qurba-joogta aljeeriya waa ay fiicnaanayaan in ay tagaan muddo dheer. Iyo waa inaad maamulida xirfadaada shaqo ee United Arab Emirates.
Shaqaalaha Algeria ayaa caan ka ah Imaaraadka. Waxaan caawinaynaa dadka ka kala yimid adduunka oo dhan si aad shaqo uga hesho UAE. Hagahayaga shaqadeena ee UAE. Kooxdayadu waxay ku muujineysaa siyaabo dhowr ah oo loogu talagalay raadinta shaqada. Kooxdayadu waxay bixisaa caawimo dhab ah oo loogu talagalay dadka cusub ee shaqo doonka ah Algeria. Gaar ahaan haddii ay jeclaan lahaayeen si ay u degaan Dubai City iyo Abu Dhabi.
Ka hor intaanan billaabin baasaabi xaqiiqda Algeria
Shaqooyinka Dubai loogu talagalay ee Algerian way fiicantahay in aan la wareegin. Laakiin Algeria sida a wadanka waa wax la yaab leh. Inta aynaan hore u dhaqaaqin oo leh xirfad ku taal Dubai Algeria. Waa inaad aragti fiican sida Algeria.
Algeria waa dalka ugu weyn by aagga Afrika.
Beerta Sahara waxay daboolaysaa in ka badan boqolkiiba 80 Algeria cajiib ah.
In ka badan hal malyan oo askar Aljeeriya ah ayaa la dagaallamayay oo ku dhuftey dagaalka ka socda Faransiiska ee 1962.
St Augustine of Hippo (354-430) wuxuu ahaa kuwa ugu caansan Algerian oo dhan. Hippo hadda waa Annaba.
Algeria waxay ku tartantay ciyaaraha Olombiga xagaaga tan iyo markii 1964 ay ku guuleysteen shan biladood oo dahab ah.
Waxay labadii jeer ku guuleysteen mid kasta oo ka mid ah ragga iyo haweenka Mitirka 1500. Midka kale wuxuu ahaa baaskiil.
Waa maxay sababta Dubai, ma aha Algeria?
Dadka kaliya ee ku dhashay Algeria si ay ugu guuleystaan ​​Nobel Prizes waxay ahaayeen Albert Camus (Literature 1957) iyo Claude Cohen-Tannoudji (Physics, 1997).
Camus wuxuu u ciyaaray goolhaye kubadda cagta ee jaamacada Algiers, taas oo noqon karta jaamacada kaliya ee adduunka ah si loo helo goolhaye Nobel Prize-ka ah ee kooxda.
2007, maxkamad ku taal Aljeeriya waxay ku xukuntay lahaanshaha dameer ah ee cunay lacagtii iibsadey iibsigiisa.
Heerkulka ugu sarreeya ee Algeria laga diiwaangeliyey wuxuu ahaa 51C (123.8F) bishii August 2011.
Waxaa jira tirooyin sii kordhaya Algeria oo ku tartamaya Imaaraadka Carabta tan iyo 2009.
Nolosha dhaqaale ee Dubai waa mid weyn!
Inta badan dadka ajnabiga ah oo ku nool Imaaraadka Carabta. Waa in la raacaa xaddidaadyo. The qunsuliyadda guud ee Algeria waxay caawineysaa howl wadeenada. Marka, waa inaad maareysaa shaqadaada raadinta ee UAE. Shaqaalaha Algeria waa kuwa ugu wanaagsan. Iyagu waa mid ka mid ah shaqaalaha caanka ah ee UAE. Iyo dad aad u fara badan oo Algeria ah oo jecel shaqooyin canshuur la'aan ah oo ay bixiyaan shirkadaha UAE. Maxaa yeelay Dubai iyo Abu Dhabi waa waa shaqo weyn!.
Dhimashada nolosha sida duulitaan ayaa runtii ku wanaagsan Duba iyo Abu Dhabi. Laakiin dhinaca kale, Algeria waxay u baahan tahay inay khibrad nooc ah ka hesho UAE. Dubai guud ahaan waxay uhadashaa sida ugu fiican meelo loogu talagalay dadka soo socota. Hadaad noqonayso duulimaad cusub ee Imaaraatka carabta. Xaqiiqdii waxaad sameyn doontaa wax aad uga badan tan Aljeeriya. Abu Dhabi iyo Dubai, kama heli doontid qaab nololeed mashquul habeenkii ah. Laakiin waad sameyn doontaa sida xaqiiqada ah u hel il dakhli oo wanaagsan. Waxaa intaas sii dheer iskuul aad u fiican adiga kids iyo waxbarasho ku habboon naftaada.
Inta badan dadka ajnebiga ah ee shirkaddayadu leeyihiin. Guud ahaan, ka yimaada Hindiya iyo Pakistan. The Shirkadda magaalada Dubai sidoo kale ogeysiis tiro badan dadka reer Filibiin iyo Saudi Arabia. Markaan maskaxda ku heynaa, kooxdeena waxay hada shaqo ugu raadinayaan Dubai shaqooyin ay ka hayaan Aljeeriya. Tusaale ahaan, kharashaadka ka baxa Hindiya iyo Pakistan ayaa shaqooyin cajiib ah ka hela Imaaraadka Carabta. Intooda badana waa aad ayaan ugu faraxsanahay inta aan ka shaqeynayo Emirates.
Farqiga ugu weyn Dubai iyo Algeria
Haddii aad raadineyso Shaqooyin ku yaal Dubai oo Algeria ah. Shirkadeena ayaa maamusha xirfad shaqo oo raadinaya dad cusub. Oo weliba, ugu Dubai oo heshiis la gashay Algeria waa la sameeyay. Sidaa darteed badankood dadka cusub ee qurbaha ku nool waxay awoodaan inay shaqo ka helaan Dubai iyo Abu Dhabi. Gaar ahaan Dubai, Abu Dhabi iyo Sharjah. Dadka cusub ee u soo guuraya UAE. Xaqiiqdii waa in waxay maamulaan xirfadahooda shaqo raadinta ee habka saxda ah. Tusaale ahaan dhaqanka dunidan carabi waa mid aad u kala duwan.
Shaqooyinka UAE ee Algeria waa loo furay martida cusub. Dhanka kale, waxaad ubaahantahay inaad tixgaliso waxyaabo badan qiimaha sare ee nolosha. Qiimaha Dubai ku barbardhiga Algeria waa mid aad u sareeya. Tusaale ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad waxbadan inbadan kubixiso Abu Dhabi marka loo eego Algeria. Iyo qiimaha nool, ku dar baabuur oo dabaq aad u badan. Qiimaha wax iibsiga ee gudaha Dubai waa 254.26% sare in ka badan Algeria.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Algeria iyo Imaaraadka. Qiimaha nolosha waa qaali, tusaale ahaan, haddii aan ka soo qaadanno qof nasiib leh Algeria. Hadana waan qaadan doonaa qof asal ahaan ka soo jeeda Dubai ama Abu Dhabi. Waan isbarbardhigi karnaa labadaba. Oo qof Aljeeriyaan ah ayaa yaraanaya oo laga yaabaa inuu fursad u helo mushahar wanaagsan. Markaas qof ka Dubai iyo Abu DhabWaxaan lacag badan ku sameynayaa. Dhanka kale, kumbuyuutarrada qaaliga ah iyo qiimaha cuntada ee qaaliga ah.
Kharashka nolosha ee dadka shaqo doonka ah ee Algeria
Isla mar ahaantaana, waxaad u baahnaan doontaa hareeraha 591,153.18DZD oo waxay noqon doontaa 18,892.43AED. Iyo haddii aan isbarbardhigno Dubai oo jeclaan lahaa si loo ilaaliyo isla heerka nolosha. Way adkaan doontaa maxaa yeelay gudaha UAE waxaad u baahan tahay inaad lacag badan sameyso. Tusaale ahaan, waad yeelan kartaa 200,000.00DZD gudaha Algiers. Iyo haddii aan ku qaadanno kirada labada magaalo sida Dubai iyo Abu Dhabi.
Xisaabinta waxay isticmaashaa kharashka nolosha waa mid aad u weyn marka la barbardhigo tusaha kirada. Waxaan rajeyneynaa inaan isbarbar dhigno qiimaha noolaanshaha inta u dhaxeysa Algeria iyo Dubai. Kharashka noloshu wuxu ka helaa dakhliga saafiga ah Imaaraadka Imaaraadka Carabta. Dhab ahaan, waxaad samayn doontaa wax ka badan cashuurta dakhliga. Waxaad awoodi kartaa beddel qaabka nolosha khibraddaada shaqo ee socdaalka. Gaar ahaan Dubai, Abu Dhabi iyo Sharjah.
Tusaalooyinka mid ka mid ah waa qiimaha maqaayadaha gudaha Dubai. Way badan yihiin sare in ka badan Algeria. Tusaale ahaan, waxay yihiin 211.59% kor u kaca qiimaha cuntada. Intaa waxaa dheer, gJaangooyooyinka qiimaha gudaha Dubai waa 63.28% sare marka loo eego dukaamada Algeria. Kharashka nolosha ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah waxaa laga yaabaa inay u egtahay kharash badan. Gaar ahaan at bilowga xirfaddaada Abu Dhabi iyo Dubai. Qofka shaqo doonka ah ee raadinaya bilowga wuxuu hubaa lacag badan.
Sidoo kale, dhowr fursado maalgelin ayaa la sameeyaa magaalada Dubai ee shirkadaha Algerian. Xaaladahan oo kale, shirkadaha Aljeeriya waxay shaqaaleeyaan dadkooda. Waa runtii u qalantaa in a fiiri shirkadaha maxalliga ah ee shaqaaleynaya Algeria ilaa Dubai. In sidan, kharashyada cusub waxay badbaadin karaan qarashyada qaarkood, maxaa yeelay shirkadaha qaar ka mid ah waxay bixiyaan guryo la wadaago.
U fiirso u-qalmitaanka Visa ee Aljeeriya
Algeria fiiso ka timid Dubai
Inaad gasho Imaaraadka Carabta waxaad u baahan tahay inaad hubiso Visa Shuruudaha looga baahan yahay muwaadiniinta Algeria. Qaar ka mid ah dadka leh xayiraad gelitaan maamul. Inta badan soo booqdayaasha cusub waxay u baahan yihiin inay fiiriyaan websaydhka fiisaha.
Sababta ugu weyn ee loo booqdo websaydhka. Waa in laga hubiyaa maamulada xeerarka kale ee shisheeyaha. Iyo maamulida dowladaha loo qoondeeyay muwaadiniinta Algeria. Xaq ma u leedahay inaad gasho Imaaraadka?.
Xeerarka laga sameeyay dalka Isutagga Imaaraatka carabta ayaa lagu sheegay Febaraayo 2018. Maaree shuruucda muwaadiniinta Algeria. Dukaamada Algerianku waxay u baahan yihiin inay haystaan ​​fiiso la'aan ama fiisal markay yimaadaan. Waxaa intaa dheer Dowladda waxay siineysaa marin u helista 47 wadamada iyo dhulalka. Iyo Forbes waxay ku guuleysatay inay darajayso booska Baasaboorka 90th booska. Gaar ahaan haddii aan ka hadlayno xorriyadda safarka.
Haddii aad isku dayday inaad u safarto UAE. Waa inaad maareysid faahfaahintaada sida ku cad Tusaha Horumarinta Henley Passport Visa loogu talagalay Aljeeriya. Waxaan shaqooyinka Dubai ka maareynaynaa Aljeeriya. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad booqato Imaaraatka Macluumaadka fiisaha.
Shaqooyinka Dubai ee Bariga Dhexe muwaadiniinta Algeria
Qurba-joogta qurbaha ee ku nool Dubai ayaa maarayn kara shaqo raadin xirfadeed. Mid ka mid ah tusaalooyinka waa UAE bogagga shaqooyinka ee dadka reer Algeria. Inta badan safarka ee adeegsanaya meeshan shaqo raadsashada qaarkood. The Shirkadda Dubai City isagoo kula talinaya dadka inay shaqo raadsadaan Dubai qadka. Shaqo-dooneyaasha cusub ee sugaya caawinta shaqo raadinta. Gaar ahaan goobta shaqada ee hoos ku xusan.
Waxaa intaa dheer, waa inaad ku biirtaa Aljeeriya shabakadda expat ee Dubai. Marwalba waxaa jira dad badan oo muhaajiriin ah oo kaa caawin doona shaqooyinka Dubai ka jooga Aljeeriya. Dhab ahaantii, inta aad adigu samee cilmi baaris shaqo isku day inaad aado Abu Dhabi iyo Dubai. Sidoo kale xariirka ka hooseeya shaqo doonka wuu awoodaa Shaqooyin ka raadso Sharjah, Ajman iyo dowladaha kale ee Emirates. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo isku day inaad dalbato meelahaas.
Ha ilaawin inaad ballaadhiso shabakaddaada bulshada. Waxbadanna hel cilmi baarista ifaya ee shaqooyinka. Shaqo ka raadso Sharjah iyo Abu Dhabi. Halkii laga raadin lahaa oo keliya Dubai. Xusuusnow taas oo kaliya musharixiinta ugu fiican ee lagu helayo shaqooyinka ka jira Imaaraadka Carabta. Hubso inaad ka mid noqon doontid. Diyaarso astaantaada si ay kuu soo booqdo wakiilada shaqaaleynta in Dubai City.
Qiimaha Iskudhiska Nolosha ee u dhexeeya Algiers iyo Dubai
Kahor intaadan go'aansan inaad runtii dooneysaa inaad shaqo hesho? Aan markale isbarbar dhigno Algeria iyo Dubai shaqo. Shaqooyinka Dubai loogu talagalay ee Algerian waa ku habboon tahay in la maareeyo. Shirkadda tirada badan waxay sameysaa dib u eegis cajiib ah ku saabsan ku noolaanshaha Dubai. Mid ka mid ah waxyaabaha ka sii daraya ee ku baxa Dubai loogu talagalay dadka ajnabiga ah waa kiro iyo raashin maalin kasta. Sababta oo ah markii aad ka soo guurto Aljeeriya una aado Dubai. Waa inaad meel Adiga oo kujira booska in qarash gareynta ay noqoneyso dhibaatada ugu weyn.
Dadka doonaya inay u guuraan Emirates. Xaqiiqdii waa inay eegaan sida shaqo looga helo Dubai iyo Abu Dhabi. Heshiiska ugu adag waa in la bilaabo a Xirfadda Dubai ka yimid Algeria. Dhanka kale, qaybta ugu adag ayaa ah helitaanka shaqadaas ugu horeysa. Ka dib si hufan ugu gudub heerka shaqo fiisaha ee Imaaraadka Carabta. Ugu dambayntiina, oo ku bilaabi doona mustaqbal mihnad ah oo ku yaal Imaaraadka Carabta.
Waxaannu raadinaynaa shaqaale badan oo ka shaqeeya UAE. Laakiin waa inaad booqataa buug yar oo loogu talagalay dadka soo socda. Sababo badan awgood Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan u guurin UEA.
Expat in Dubai for Algerian
Expat.com waa meel kale oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Guud ahaan marka la hadlayo, waad la xiriiri kartaa kuwa kale. La hadal dadka kale ee Algeria ka socda ee shaqo raadinaya. Waxaa jira Tirada sii kordhaysa ee dadka u dhashay dalka Imaaraadka. On the portal Expat waxaad naftaada ku dari kartaa kooxaha bulshada.
Qaar ka mid ah dadka horey u jiray Algeria. Waxay kaa caawin kartaa inaad shaqo hesho. Shirkaddayadu waxay si xooggan kula talineysaa dadka inay iska diiwaan galiyaan expat.com. Waa inaad la hadashaa dadka kale sida loo isticmaalo macaawinada safaaradaha si ay u helaan shaqooyin oo ku taal Dubai kana yimid Algeria. Sidoo kale, hubi inaad ku diiwaangelin doontid faahfaahintaada buuxda bogga iyo ku dar CV-gaaga iyo macluumaadkaaga keydka macluumaadka.
Xirfadda Dubai ee Algerian xaqiiqdii
Xaqiiqdii sidoo kale waa mashiinka raadinta xirfadaha ugu badan. Gaar ahaan dadka shaqo doonka Aljeeriya. Shirkadeena dhowr jeer ayaa sheegeysa dhab ahaantii a bogga wanaagsan ee loogu talagalay dadka ka shaqeeya ugxanta. Markaa hadaad ku nooshahay Aljeeriya oo aad rabto inaad shaqo ka hesho Dubai oo u shaqeysa Algerian. Xaqiiqdii Xariirka shaqadu waa ikhtiyaar fiican. Xitaa waad awoodi kartaa shaqo hel adigoon booqan Imaaraadka.
Xirfadda UAE waa mid cajiib ah dadka qurbajoogta ah. Shirkadeena ayaa hubineysa inaad bilowdo Isticmaalka Run ahaantii. Waa a shaqo aad u fiican oo shaqo raadin ah oo loogu talagalay ugaarsadaha xirfadlayda ka yimid Algeria oo eegaya shaqada. Markaad tahay Algeria oo ku sugan Imaaraadka Carabta, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dalabkaaga shaqo uu yahay mid aan muuqan. Waxkasta oo ay kuwa kale kuu sheegi doonaan. Kaliya ugu fiican profile on goobaha shaqooyinka ee Imaaraadka Aasiya inaad fursad u heshid.
Dubai Resume (CV) Qoritaanka Aljeeriya
Mid ka mid ah waxa ugu weyn ee shaqo raadintaada waa CV wanaagsan. Iyadoo aan loo eegin macnaha farsamada ee murashax kasta. CV-ga waa marketing waxna waa in lagu magacaabaa CV ama dib u soo noqoshada. Magaca ayaa ka soo baxaya suuq caalami ah oo ka socda France. Resume ayaa ah mid ujeeddo kaliya ah. Si loo gaaro shaqo-bixiyeyaasha Dubai iyo shaqaaleysiinta. Ujeedooyinka CV-da waa isku mid. Kaliya kan ugu fiican ayaa ah kan ugu fiican. Maaddaama macnaha cv-yada ah ee CV sida caadiga ah loo isticmaalo Dubai. Shirkadeenu waxay kuu isticmaali doontaa adiga. Waa inaad tagtaa maqaalkan oo dhan. Dhab ahaantii, ku caawi si ay shaqo ugu hesho Imaaraadka Carabta.
Shirkadeena waa halkaan, si lagaaga caawiyo shaqooyinka Dubai ee Aljeeriya. Shirkaddayada ayaa kuu maareysa cilmi baaris faahfaahsan oo ku saabsan arrimaha gaarka ah ee Dubai intaad raadineyso shaqo. Inta badan dadka ajnabiga ah ee aad u baahan tahay inaad ka war hayid dib u bilaabista muuqaalka. Si aad shaqo u hesho markaad wax qorayso aad u fiican tahay Dubai CV.
Sidii duulimaad cusub oo uga yimid Algeria shaqooyinka UAE. Waxaad u baahan tahay tilmaamo guud oo ku saabsan sida loo qoro CV-yada iyo xarafyada. Uma baahnid inaad wax lacag ah bixisid si CV-gaagu kor ugu socdo oo uu socodsiiyo. In Google iyo Bing, waxaad ka heli doontaa boqolaal bogag internet oo bilaash ah oo ku siin kara resume bilaash ah. Guud ahaan marka la hadlayo, waxaad u adeegsan kartaa Google inaad hesho Resume wanaagsan. Laakiin haddii aad tahay raadinta Dubai oo shaqeyneysa dib u bilaabista / CV. Waa in aad adeegso tusaaleyaal loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Dubai oo halkan ku dheji macluumaad dheeraad ah. Marwalba waxaad ku bilowdaa Rajo wanaagsan ee Dubai!
Gabagabaynta shaqooyinka Dubai ee Aljeeriya
Si loo gabagabeeyo sida shaqo loo helo Dubai Algeria. Waxaad u baahan tahay inaad ogaatid meesha aad adiga si aad shaqo u raadsato. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loo qoro CV kaamil ah. Sidoo kale waxa Algerian u baahan yahay in laga helo UAE ka hor intaadan guurin. Sababtan awgeed, shirkaddayadu waxay maamushay buugan. Shirkadda Magaalada Dubai oo rajaynaysa inaad adigu rabto diiwaan gelinta faahfaahintaada shaqo la shirkadayada. Iyo farxad weyn, our Shirkadu waxay kugu meeleyn doontaa xirfad ku yaalo Imaaraadka Imaaraadka Carabta.
Shirkadda Dubai City hadda siinta hagyo fiican ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hada waad heli kartaa hagitaan, talooyin iyo shaqo ka helis Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.